トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "nyika", iro shamwari manzwiro?
Card of "kubudirira" riri munzira
vachishandisa kadhi 3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera zviri "nyika" neizvi nzvimbo usununguke yokunyatsoongorora ane "chido kuzadzika", etc. yakanaka chaizvo zvinorehwa "nyika" iri, tiri aireva kuti aunzwe mugumisiro ezvinhu yakapoteredza wake dzinogutsa mune zvose zvatinoita.
Nepo kadhi uyu ndiye zvake ari Major Arcana, izvozvo inozivikanwa pamusoro-pamwero pakati pavo somunhu ane zvaanoreva akanaka. Lee tariro uye zvishuvo huchizadzika, pane pfungwa kuti ubudirire, asi nekuda tora mupfungwa kuti kwokupedzisira kupera, kukura zvikuru mberi rinogona kunzi rirege kutarisirwa.
zvakanaka nzvimbo "nyika" zvinofanirwa kureva "nyika" riri, zvichireva kuti unogona kuwana zvakanaka mamiriro ezvinhu kukunda kusvikira tichirwisa akaoma, dambudziko iri ndiwe chete. Kureva inofara, kana rudo muchato, I angasarudza kuzoroorwa saka kure kunge zvakataurwa naye takanga kufambidzana. Kana
hapana mukomana ano munhu, zvino kuti kutamba yenhamo kusangana, uye kuramba mukana kuti mumwe Pati munhu muupenyu. Munhu uyo ??ari kuti kunetseka murudo rusina kukwana ? kuti kuti kana akawana kuti zvinhu une kuda kudanana manzwiro, dzimwe nguva kubva kwaari zvaizova risingatarisirwi akareurura.
saka kure zvinodiwa uye tariro azadzika "nyika", ndicho chiratidzo kuti zvinokwanisika kuti migumisiro yakanakisisa kuti zvawave akamirira mupfungwa dzangu. Nokuti manzwiro ake muchitsvaka kwamuri, kuti iye ave kunetseka vaizova zvichida kubudirira kunyange kana nzira yavo pachavo. Nepo kupedza kunonakidza nguva nevanhu vaviri, tinoratidza kuti iwe kuderedza daro.
mupikisi manzwiro kuti neizvi nzvimbo "nyika" zvinofanirwa kureva
"nyika Kana munda "kuri neizvi nzvimbo, kuti kurwisana uye kuita, zvinoreva kuti iwe aizozadzisa ari mupurigatori zvakaoma kutaura kuti inogutsa.
muchato achava panyaya kubva haana kumbofunga zvakakomba anokumhan'arira kuti, kana kuipa nyore kugamuchirwa, munzvimbo inonzi muchato anoda uye pashure rimwe danho, akadai dambudziko anova kuroorana kubvisa zvichiitika, haana havo hazvirevi kuti mugumisiro. Sezvo
manzwiro ake vanogona kuendeswa kurutivi rumwe, ukama hwavo kuchenjera kuramba mamiriro. Zvakanaka kuenda nesimba kunyange kureurura, sezvisina kana vanhu manzwiro maviri haasi rinogonawo kuva kurwa kunosuwisa panguva mukana. Kushandura aibuda mugumo, edza kuramba Nezvagara Zviripo, tinoratidza kuti uchitarisa mamiriro ezvinhu pamwe inonyanya kukoshesa manzwiro ake.